FA-ga Oo Sii Buukimay Diyaaradii Xulka England Ku Celin Laheyd Dalkooda Ka Dib Dhamaadka Wareega Group-ka Euro 2012. - jornalizem
FA-ga Oo Sii Buukimay Diyaaradii Xulka England Ku Celin Laheyd Dalkooda Ka Dib Dhamaadka Wareega Group-ka Euro 2012.
Diyaaradii xulka England ku soo celin laheyd wadankooda ayaa la sii buukimay ka dib kulanka ugu danbeeya ee wareega Group-ka sida ay ogaatay jariirada The Sun On Sunday.
The Sun ayaa sheegeysa in xiriirka kubada cagta Ingariiska FA-ga uu sii kireeyay diyaaradii wadankooda ku soo celin laheyd xulka England 20ka bisha June, ka dib marka England ay la ciyaarto kulankooda ugu danbeeya wareega Group-ka xulka Ukraine 19ka bishaan.
Wargeyska oo soo xiganay madax ka tirsan FA-ga oo aysan magacaabin ayaa sheegay in sababta aysan aheyn inay filanayaan in xulka uu ku soo hari doono wareega Group-ka balse ay tahay diyaargarow ku aadan in wax walba ay dhici karaan.
Lakiin xiddigii hore ee England Alan Mullery ayaa sii kireynta diyaaradaas ku tilmaamay wax qariib ah, waxaana uu The Sun u sheegay: “ Ciyaaryahan ahaan ma jeclaadeen in la sii diyaariyo diyaaradii I soo celin laheyd”.
Diyuurada Titan Airways oo ah tan la sii buukimay ayaa waxa ay ku balansan tahay inay ka soo kacdo Krakow oo ah xarunta xulka England ee Poland 20ka June.
Waxaana ay ku balansan tahay inay ka degto Manchester 4ta galabnimo. Sida The Sun ay sheegtay FA-ga ayaa diiday inay si cad ah uga hadlaan arintaan.
Dabcan waxa ay ku xirnaan doontaa isticmaalka diyaaradaas hadii Three Lions ay ku soo harto wareega Group-ka, waxaana ay habeen danbe kulankooda ugu horeeya ay la ciyaari doonaan France.